Ady & Fifandirana · Mey, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Mey, 2011
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Mey, 2011
Côte d'Ivoire : Ny Antsipirihan'ny Fisamborana Ny Filoha Teo Aloha Anaty Lahatsary Vaovao
Afrika Mainty05 Mey 2011
Be ny lahatsary mivoaka maneho ny fizoran'ny fisamborana ny filoha teo aloha tao Côte d'Ivoire sy ny vadiny , Laurent ary Simone Gbagbo. mampiseho ny ampahany amin'ny tranga nisamborana an-dry Gbagbo, nanomboka tamin'ny fanbdarohana baomba ny toeram-ponenan-dry zareo nataon'ny tafika Frantsay ka hatramin'ny namindràna ny fianakavian'i Gbagbo ho any amin'ny...
Iran: Naneho hevitra tamin'ny fahafatesan'i Bin Laden ny bilaogera
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Mey 2011
Bilaogera Iraniana maromaro no naneho ny heviny tamin'ny fahafatesan'i Osama Bin Laden. Ny sasany miaraka amin'ny fanamarihana matotra, ny vitsy miaraka amin'ny fanontaniana ary ny hafa miaraka amin'ny fanesoana. Bilaogera Iraniana Hesab nanontany fa nahoana no notifirina teo amin'ny lohany izy? Mohmmad Moini nanoratra fa manamarika fotokevitra i Bin Laden,...
Maraoka: Maneho Hevitra Momba ny Fanafihana tao Marrakech ireo Mpitoraka Bilaogy
Tratry ny fipoahana baomba i Marrakech, tanàna sangan'ny fizahantany ao Maraoka tamin'ny Talata teo, izay nandrava trano fisakafoana iray tao anatin'ny ora fisakafoanana indrindra, ny Argana, manamorona ny Kianja Jamaa Lefna. Araka ny fanambarana ofisialy dia nahafatesana olona 16 ilay fipoahana ka maro tamin'ireo no vahiny.Ireo mpitoraka bilaogy sy mpiondana...
Pakistana: Fanehoankevitra Noho Ny Fahafatesan'i Osama Bin Laden
Azia Atsimo02 Mey 2011
Efa ela talohan'ny kabarin'ny Filoha Amerikana Obama no niraraka tao amin'ny twitter ny vaovao fa hoe maty i Osama Bin Laden ary efa nanapaingotra izay vaovao izay daholo ny mpampahalala vaovao rehetra. Tsy ela ny tontolon'ny twitter dia nanomboka nipoaka noho ireo bitsika avy amin'izao tontolo izao. Ny marina dia...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Mey 2011